Tun Tun's Photo Diary: February 2015
Compact camera လေးက ကိုယ်အပြင်သွားတိုင်း အမြဲပါနေတော့၊ တခုခု စားတိုင်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်တယ်။ အဲ့လို ရိုက်ရင်း ရိုက်ရင်း ပုံတွေ အရမ်းများနေလို. သဘောကျတဲ့ ပုံလေးတွေကို စုပြီး Food Photography ပို.စ်တွေ တင်မယ်လို. စိတ်ကူးထားတယ်။ အရင်တုန်းကလဲ တင်ဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်မို.လား?
at 2/26/2015 07:44:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Chinese Food, Food, Myanmar Food, Singapore Food
at 2/23/2015 05:58:00 PM Links to this post No comments:
နှစ်တိုင်း တရုတ်နှစ်ကူးဆိုရင် ရုံးမှာ အကျွေးအမွေးရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလဲ အရင်နှစ်တွေကလို Loh Hei လုပ်ပါတယ်။ Loh Hei ဆိုတာကတော့ မြန်မာလိုအလွယ်ပြော ရရင်တော့ အစုံသုတ်ပေါ့။ သဘောင်္သီး စိမ်း၊ မုန်လာဥနီ စတာတွေ အမျှင်လိုက် ခြစ်ထားတဲ့ ဟာနဲ. တခြား အဆာပလာနဲ. နယ်ပြီး မွေလိုက်တာပါ။ အဲဒီဗူးလေးတွေထဲက ဟာတွေကို အကုန်ရောမွေလိုက်ရုံပါပဲ။ နောက်ပြီး salmon ငါး အစိမ်းလဲပါပါသေးတယ်။
at 2/19/2015 06:00:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Chinese Food, Event, Food, Singapore, Singapore Food
at 2/15/2015 01:06:00 AM Links to this post2comments:
2015-Jan-31, East Coast park က Big splash မှာ လုပ်သွားတဲ့ ဒီအိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်ပွဲ အတွက် လုပ်အားပေး ဓါတ်ပုံဆရာ ၃ဦး အလိုရှိတယ် ဆိုပြီး Facebook မှာ ရှယ်ထားတာတွေ.လိုက်လို. လုပ်အားပေးဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီလို ပွဲမျိုးကို တခါမှလဲ မသွားဖူးပါဘူး။ ကိုယ်ကလဲ ကြောင်တွေ၊ ခွေးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာနဲ. အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အရင်ကလဲ စင်ကာပူ လမ်းဘေးက ကြောင်တွေကို ကြုံရင် ကြုံသလို ဓါတ်ပုံ ရိုက်နေကြဆိုတော့ သိပ်တော့ အခက်အခဲကြီး မရှိပါဘူး။
at 2/09/2015 06:03:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Animal, Food, Singapore
2015 Chinese New Year Decoration @ China Town, Singapore
2015-Feb-01 ညနေပိုင်း အားနေတာနဲ. China Town ဘက်ကို ရောက်သွားတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Chinese New Year Decoration တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာပါ။ နှစ်တိုင်း ရိုက်နေကျဆိုတော့ လည်း ပျင်းတော့ ပျင်းသား။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူမှာက ဓါတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာက သိပ်မရှိဘူးလေ။ ဒါကြောင့် DSLR ကင်မရာနဲ.လဲ သွားရမှာ လေးလို. မနှစ်က ၀ယ်ထားတဲ့ Sony compact camera (RX100 II) နဲ. ပဲ သွားခဲ့တယ်။
DSLR ရှိရက်နဲ. ဘာလို. compact camera ၀ယ်ဖြစ်သလဲ?
အဲဒီကင်မရာ ၀ယ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က DSLR ကင်မ၇ာကို မသယ်ချင်။ ဖုန်းကင်မရာ ကို မသုံးချင်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာသုံးဖို.ပါ။ DSLR သုံးနေတာ ကြာလာတော့ ဖုန်းကင်မရာ ရဲ. Image Quality ကို ဘယ်လိုမှ စိတ်တိုင်းမကျနိုင်ဘူး။ DSLR ကျတော့ အမြဲတမ်း မသယ်နိုင်ဘူးလေ။ Compact camera လေးကျတော့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ထည့်ထားတော့ ဘယ်သွားသွား ကိုယ်နဲ. အမြဲတမ်းပါတယ်။
at 2/03/2015 04:56:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Chinese Food, Food, Night, Singapore, Singapore Food